नेपाली काँग्रेसको महासमिति आजदेखि : देशभरका नेता राजधानीमा — Motivatenews.Com
नेपाली काँग्रेसको महासमिति आजदेखि : देशभरका नेता राजधानीमा
मङ्सिर २८, काठमाडौँ- नेपाली काँग्रेसको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठक आज शुक्रवार देखि शुरु हुदैछ । विधान संशोधन मुख्य एजेण्डाका साथ शुरु हुन लागेको महासमिति बैठकमा अन्य चारवटा दस्तवेजपनि पेश हुदैछ । पुस ३ गते सम्म बस्ने उक्त बैठकको उद्घाटन भने भोली शनिवार मात्र हुने भएको छ ।
पहिलो दिन आज अपरान्ह पार्टी प्रधान कार्यालय सानेपामा नाम दर्ता तथा स्वागतको कार्यक्रम राखिएको छ भने भोली ११ वजे यगम्बर पार्टी प्यालेस रामशाहपथमा उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको छ । अढाईघण्टाको उद्घाटनशत्र सकिए लगत्तै लगातार पुस ३ गतेसम्म बन्दशत्र सञ्चालन हुनेछ ।
बन्दशत्रमा महामन्त्री एवं विधान मस्यौदा समितिका संयोजक पुर्णवहादुर खड्काले विधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नुहुने छ भने अर्का महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सांगठनिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । महासमिति बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र नीधिले राजनीतिक दस्तावेज र सह महामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले काँग्रेसको समग्र आर्थिक नीतिबारे प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने छ । पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन भने कोषध्यक्ष सितादेवी यादवले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
वैठकमा प्रस्तुत हुने ५ वटै दस्तावेजमाथि छलफल गर्न महासमति सदस्यहरुको ७ वटा प्रदेश स्तरीय समुह बनाइने छ । यो समुह बनाइसकेपछि भोलिपल्ट आइतवार देखि लगातार ती दस्तावेजमाथि छलफल हुनेछ । केन्द्रिय समितिको बाट सर्वसम्बत पास भएर आए पनि फरक धारणा सहित आएपनि पाँचवटै सबै महासमिति बैठकमै पेश हुनेछ । महासमिति बैठकले केन्द्रिय समितिले सर्वसम्मतीले ल्याएको प्रस्तावलाई समेत इन्कार गर्न सक्छ ।
काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार महासमतिमा १ हजार ६ सय ६० सहभागि हुनेछन् । जसमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट (२४० बाट) पाच जनाको दरले १ हजार २ सय महासमिति प्रतिनिधि हुनेछन भने भातृ एवं सुभेच्छुक संघसंस्थाका ९७ जना प्रतिनिधि र जनसम्पर्क समिति बाट पनि ९७ जना प्रतिनिधि सो बैठकमा सहभागि हुनेछन् । महासमिति सदस्य नभएका २९ जना जिल्ला सभापति र २६ जना सांसद पनि महासमिति बैठकमा भाग लिदैछन् । केन्द्रिय सदस्यहरु सबै सो बैठकमा उपस्थित हुनेछन् ।